हिमाल खबरपत्रिका | ‘बाघको वृद्घि उत्साहजनक छ’
‘बाघको वृद्घि उत्साहजनक छ’
१४ मंसीरदेखि बाघ गणना थालेको वन मन्त्रालय, जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकाल भन्छन्, “बाघको संरक्षण भनेको मान्छेकै संरक्षण हो।”
बाघ गणनाको उद्देश्य के हो ?
बाघ पाइने विश्वका १३ देशका सरकार प्रमुखहरुको सन् २०१० मा बसेको बैठकले सन् २०२२ मा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि बाघको अवस्था र संख्या पत्ता लगाउन आवश्यक छ । त्यसैले बाघ गणना गर्न लागिएको हो ।
नेपालमा बाघको अवस्था चाहिं कस्तो छ ?
नेपालमा सन् २०१३ मा गरिएको गणनामा १९८ वटा बाघ भेटिएको थियो । विश्वमा सबैभन्दा बढी बाघ भारतमा पाइन्छ । नेपाल भने आठौंमा पर्छ । पछिल्लो समय नेपाल र भारतमा बाघको वृद्धि उत्साहजनक छ ।
बाघ किन जोगाउने ?
बाघ जोगाउनु भनेको जंगल जोगाउनु हो । जंगलमा धेरै प्रकारका जीवजन्तु हुन्छन् । त्यसले पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बचाइराख्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण विना मानव जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । वास्तवमा बाघको संरक्षण भनेकै मानिसको संरक्षण हो ।
बाघ मात्रै बढाउने कि जंगल पनि ?
बाघ बढाउने निर्णयपछि नै सरकारले सन् २०१० मा ५५० वर्गकिलोमिटर वन क्षेत्रलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका रुपमा घोषणा ग¥यो । ४९९ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई विस्तार गरेर ६२७ वर्ग किमी पु¥याइयो । घाँसेमैदान, खोलानालाको व्यवस्थापनका साथै स्थानीय समुदायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।
बाघ लोप हुनुका कारण के के हुन् ?
प्रमुख कारण चोरीशिकारी र यसका अंगको अवैध व्यापार हो । यसबाहेक शहरीकरण तथा वनको खण्डीकरणले गर्दा पनि आहारा अभावमा बाघ लोप भइरहेका छन् । मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिहरु बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनले पनि बाघलाई समस्यामा पारेको छ ।